Munamato kuna La Santa Muerte weMari. ? Inoshanda mumaawa makumi maviri nemana!
Munamato kuRufu Rutsvene rwemari Iine simba chaizvo uye ichi ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vachiramba vachijoinha mutsara wevatendi uye kuti kune akawanda manenji akapihwa neMusande uyu
Kukumbira mari chinhu chakajairika, chingave chisingazivikanwe zvakanyanya ndiwo munamato weichi chikumbiro, kunyange chero chikumbiro chingaitwe kwauri.
Wese munhu anokwira munamato anofanira kudaro nekutenda kunobva pamoyo, zvisinei nekuti kuna ani chikumbiro chiri kuitwa nekuti izvi ndizvo chete zvinodiwa.
1 Rufu Rutsvene runondibatsira here?
2 Munamato kuna Santa Muerte weMari
3 Chii chiri munyengetero uyu?
4 Ndirini pandinogona kunyengetera munamato kuna Santa Muerte kukwezva mari?
Rufu Rutsvene runondibatsira here?
Uyu Mutsvene anogona kubatsira munhu wese waanosvika kwaari nekutenda kuti izvo zvaanenge akumbira zvinogoneka.
Kunyangwe zvingave zvisingaite sei kuona izvo zviri kubvunzwa, chakakosha ndechekuti uzive kuti icho chiri kuitiswa chiito chizere nekutenda uye nekunamata chaiko nekuti munamato chombo chine simba uye nokudaro chinofanira kushandiswa neruremekedzo rukuru. uye kungwara
Munamato kuna Santa Muerte weMari
Rufu rwakaropafadzwa Rufu, musikana wangu chena ane simba, shamwari yakatendeka uye shamwari mumugwagwa watinovimba nawo nguva dzese dzehupenyu hwedu hwakaoma uye hwakaoma, uye kwaari isu tese tichava nemufaro wekukuona pazuva rekupedzisira rehupenyu.
Iwe unoziva zvakavanzika zvekupfuma, bvumira vhiri kuti riitike zvomuzvarirwo kuenda kunongokonzeresa nzvimbo.
Nditendere nditore chikamu chesimba rako uye ndidane kwandiri izvo zvandinokumbira kwauri, rombo rakanaka, kuwanda nekubudirira.
Aritari yako ichapupurira iyo tsamba yandichave newe, muridzi wezvakavanzika zvemhanza newakawanda.
Bvisa Lady ane simba nekufema kwako uye anotyisidzira uye njodzi dzinotarisana nepamusoro pangu, kurambidza zvakashata kuitira kuti kupenya kunovhenekerwa nechiedza chako, kunosvika kune avo vanokuda.
Ndipei rombo rakanaka, mupfumi nebhizinesi, iro rombo rakanaka rinouya pasuo rangu, uye kuti kuwanda nekubudirira kunotonga mumba mangu.
Ndichakuvongai nezvipiriso uye muchavimbika kwandiri nekusingaperi. Ndatenda shamwari yakatendeka uye shamwari yangu White Musikana, Rangu rutsvene kufa adored.
(Ita chikumbiro chako pano nokutenda kwakawanda.)
Uyu ndiwo munamato watinogona kuvimba nawo uye watinogona kusvika nawo zvinangwa zvemari zvatakaisa.
Izvo hazvina basa kuti yakakura sei kana yakanyanya kuoma.
Munamato uyu une simba uye unogona kubatsira mukati mamiriro ese ehupfumi izvo zvinogona kuitika muhupenyu.
Mari inokonzeresa nekuti nekuti kunze kwayo isu hatina yekutenga simba izvo zvakakosha.
Izvi ndizvo una oración zvinogona kutibatsira zvakanyanya kana takaita rimwe bhizimusi rakaipa sekunge tiri muchikamu chekuti tisingazive zvakajeka kuti ndekudyara kupi kwatinofanira kuita.
Mari inodzoka kwatiri nekukurumidza uye nechishamiso, ndosaka munamato uyu uchifanira kuitwa zvine musoro.
Ndirini pandinogona kunyengetera munamato kuna Santa Muerte kukwezva mari?
Chero nguva yakakodzera kukwidza izvi uye mimwe minyengetero, chinhu chakakosha kuziva zvatiri kuita.
Kuziva kuti chiitiko chekutenda uye kuti tinokwanisa kuwana chishamiso icho chatiri kukumbira, sezvo pasina kutenda zvinokwanisika kuti zvikumbiro zvedu zvive nemhinduro, kutenda ndiko kiyi yemunamato wese.
Iti munamato kuna Santa Muerte wemari ine kutenda kwakawanda.
Munamato kuna Santa Muerte kwerudo rusingaiti
Minyengetero ine simba kuna Santa Muerte yebasa
Munamato wesimba weSyyprian Woyera